News - Bụ 1060nm Diode Laser Slimming Machine A Better Alternative Maka Isi Ike Abụba Abụba, Handhụnanya ịlesụ na ndị ọzọ Isi Abụba?
Ọ bụrụ n’ị gbalịsiri ike iwepu abụba afọ na-agba isi akwara, na-ahụ maka ịhụnanya na ụdị abụba ndị ọzọ, ị ga-ege ntị na ọtụtụ mgbasa ozi telivishọn maka CoolSculpting. Mgbasa ozi ndị a na-egosipụta ikike ọgwụgwọ a na-enweghị ọgwụgwọ iji tufuo abụba na-adịgide mgbe nri na mmega ahụ enyerela gị aka ịkwụsị ibu. Mgbe ọtụtụ afọ nke ịgwọ ndị ọrịa na ịrụ ọtụtụ puku usoro ịchọ mma, abịara m kwubiri na ọgwụgwọ dị iche iche na-enweghị ọgwụgwọ bụ ụzọ ka mma maka ọtụtụ ndị ọrịa. Usoro ọgwụgwọ a bụ 1060nm diode laser slimming igwe na-ere ọkụ.
Kama iji oyi, 1060nm diode laser slimming igwe na-eji okpomọkụ sitere na lasers iji gbuo mkpụrụ ndụ abụba. Ọ nwere otu usoro zuru oke - anụ abụba na-ezubere iche, gbuo, ma jiri nwayọ wepụ ya. N'ime ọnwa ole na ole ị gwọchara gị, ị ga-ahụ mbelata abụba na mpaghara ezubere iche.
1060nm diode laser slimming igwe dị mma maka ndị nwere obere akụkụ nke abụba dị isi ike ma ọ bụghị na ha nọ n'ọnọdụ ahụ dị mma. Nsonaazụ ahụ na-adịgide adịgide ma ọ bụrụhaala na onye ọrịa ahụ na-ejide ibu na ahụike ha.
Shapedị ngwaọrụ ahụ na-eme ka o sie ike iji akụkụ akụkụ ahụ curved, yabụ ọ pere mpe karịa nhọrọ ndị ọzọ. Patientsfọdụ ndị ọrịa na-akọ na ha nwere mmetụta ntakịrị ọkụ n'ihi okpomọkụ, ọ bụ ezie na ngwaọrụ ahụ nwere obi jụrụ n'oge ọgwụgwọ ahụ.
Na 1060nm diode laser slimming igwe, ọ dịghị mmiri ma ọ bụ Anam Udeme nke anụ ahụ. Ngwaọrụ dina n’elu ebe ịchọrọ ịda mbà. Ike laser na-abanye n'ime anụ ahụ ma na-ebute mmerụ ahụ ọkụ na mkpụrụ ndụ abụba. Ha na-enweta ọnwụ mkpụrụ ndụ, sistemu nchekwa gị ga-ewepụ ha.
1060nm diode laser slimming igwe bụ ihe adaba
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụsi ọrụ ike (ụbọchị ndị a, onye na-abụghị?) Treatinggwọ mpaghara abụọ na 25 nkeji na 1060nm diode laser slimming machine bụ nnukwu nchekwa nchekwa oge iji awa elekere kwa ngalaba na cryolipolysis. Ma ebe ọ bụ na enweghị obere oge na 1060nm diode laser slimming machine, ịnwere ike ịnata ọgwụgwọ wee laghachite na ndụ gị.